Ahoana ny Nandaozan’i Alexey Navalny ny Nasionalisma Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Avrily 2017 4:59 GMT
Saripika: Alexey Navalny / Instagram
Tamin'ny Febroary 2011, tokony ho sivy volana mialoha ny nampalaza an'i Alexey Navalny ho iray amin'ny Rosiana mpanohitra anti-Potinina azy eo amin'ny sehatra iraisampirenena, namoahan'ny The Guardian tantara momba azy mitondra ny lohateny hoe “Russia’s Chief Whistleblower Wants to Jail the Corrupt” [Tia hanagadra ilay mpanao kolikoly ny lehiben'ny mpanao ampamoaka ao Rosia]. Manasongadina ny sarin'i Navalny ao anaty akanjo-ba tsy mahafinaritra mihitsy ny lahatsoratra amin'io fotoana io.
Ny ampitso, nananihany tao amin'ny blaoginy LiveJournal i Navalny, “Tsy haiko hoe maninona ireto vahiny maharikoriko ireto no tia mampiasa ireny karazan-tsary ireny. Ny fanazavana azi heverina dia hoe, isaky ny misy tantara iresahan'ny fampitam-baovao vahiny momba ahy, dia tsy maintsy atao ny manamarika ahy amim-pitandremana fa ny fomba fijerin'io lehilahy io dia mitovitovy amin'ny fomba fijerin'ny nasionalista amin'ny ankapobeny.’ Ao an-tsain'ny Eoropeana sy ny Amerikana, ny akanjo-ba dia sariohatry ny dondrom-belona lava maso. Angamba tsy mampatahotra kokoa ny ‘nasionalista-donendrina’.”
Nahatratra ny Fotoana Lehibe
Mihoatra ny enin-taona taty aoriana, nandeha lalan-davitra i Navalny. Nialoha ny faran'ny taona 2011, nitarika andiana mpanao fihetsiketsehana maro dia maro manohitra ny valim-pifidianana parlemantera izy. Tamin'ny taona 2013, nifampihaika tamin'ny ben'ny tanànan'i Moskoa tamin'izany fotoana izany azy ary saika nitarika ho any amin'ny fihodinana faharoa ny fifidianana. Ankehitriny efa imbetsaka ny fitsarana rosiana no nanameloka azy tamin'ny heloka bevava maro dia maro, izay miafara amin'ny sazy mihantona sy ady an-kafetsena manakana azy ara-teknika tsy ho afa-mirotsaka hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny volana marsa ho avy io. Na dia mirotsaka hifaninana ho filoha aza izy, dia ho sarotra dia sarotra ny ahafahany mirotsaka ho amin'izany fifidianana izany.
Lasa olo-malaza iraisampirenena eo amin'ny sehatry ny politika, fariparitana hatrany ho ‘mpitarika ny fanoherana rosiana’, manana taranjam-pampitam-baovao an-tserasera sy tetikasa maha-olom-pirenena maro dia maro tarihiny ankehitriny ilay lehilahy nalaza tamin'ny voalohany ho ‘nasionalista-donendrina’ manana kaonty LiveJournal. Tamin'ny tapak'ity volana avrily ity, nitatitra ny ekipan'i Navalny fa mihoatra ny 77.000 ny isan'ny olona nanolo-tena hanao fanentanana ho azy amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena hoavy, manakaiky ny 320.000 ny isan'ny olona nanasonia ny zony hifaninana amin'ny fifidianana amin'ny herintaona, ary mihoatra ny 690.000 dolara amerikana ny fanomezana nataon'ny olona ho amin'izany.
Nahazo fahombiazana mipoapoaka ny fanentanana haha-filohampienena an'i Alexei Navalny hatramin'ny nanapahany hevitra hifampitolona amin'ny praiminisitra Dmitry Medvedev.
Tamin'ny fiandohan'ity volana ity, nitatitra ny fantsona fahitalavitra mahaleotena Dozhd fa efa mandrafitra fanentanana manoso-potaka an'i Navalny ireo manampahefanan'ny politika anatiny ao amin'ny fitondrana Potinina, amin'ny fanondroana azy ho fasista. Ny ampitson'izany andro izany fotsiny, nisy lahatsary malaza iray tsara dia tsara ny nanatontosana azy nivoaka tao amin'ny YouTube — vita amin'ny style sy vokatra raitra dia raitra amin'ny lahatsary famoakan'ny pro-Kremlin taloha — mampitaha an'i Navalny amin'i Adolf Hitler.
Tsy ampy herinandro taorian'izany, nanaisotra ny lahatsary noho ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona ny YouTube, saingy mbola mivezivezy ireo dika mitovy aminy, ary efa nahazo mpijery mihoatra ny 2 tapitrisa ny ôrizinaly talohan'ny nanesorana azy.
Ny fanantenan'ireo olona nanatontosa io lahatsary io dia ny hanakivy ny olona tsy hanohana an'i Navalny amin'ny alalan'ny fampitomboana diso tafahoatra ny fomba fijeriny nasionalista sy hampahatsiahy ny mpijery momba ilay tanoralahy nanainga ny nasionalisma hampalaza ny tenany.
Saingy niteraka zavatra hafa ihany koa ny famakafakana ny nasionalisman'i Alexey Navalny: mampahatsiahy ny Rosiana nasionalista izany fa maro ny fomba fijery sy ny fomba fiteny nampiasainy hampiray hina azy ireo efa nilaozany.
Ary inona moa ny olana raha diso fanantenana ireo olona ireo?
Malaza amin'ny fanatsarany ny lanjany ara-politika ny nasionalista rosiana. Tamin'ny taona 2008 i Navalny tenany nilaza fa 40 isanjato amin'ny Rosiana no “mirona ara-natiora mankany amin'ny nasionalisma.” Telo taona taty aoriana, nilaza i Alexander Belov (Nasionalista malaza iray nigadra fito taona sy tapany tany am-ponja noho ny famadihana [soloky] maro) fa 70 isanjato amin'ny Rosiana no nasionalista “saingy tsy manana solontena ara-politika ry zareo.”
Raha mijery ny politikam-pifidianana ao Rosia, sarotra ny manamarina ireny isa ireny, ary tsy azo lavina fa ny ampahany betsaka amin'ny Rosiana, ary maro amin'izany ny nasionalista rosiana, no nandray ny fanovanana an'i Krimea. Ny zava-misy, mpanao fanadihadiana ara-politika maro no nandresy lahatra fa ny lazaina ho “Marimaritra Iraisana Krimeana” no mitazona ny fitiavana [laza] lehibe an'i Vladimir Potinina.
Folo taona lasa izay, nasionalista loatra i Navalny ka sarotra ny nandreseny ireo sangany liberaly, saingy ankehitriny ahiana ho very fanohanana avy amin'ny namana taloha sy ny vahoaka amin'ny ankapobeny izy satria tsy nasionalista loatra.
Ary izany no fampitandremana nataon'i Alexandr Khramov tao amin'ny lahatsoratra iray nivoaka tamin'ny Zoma tao amin'ny tranonkalan'ny nasionalista vaovao “Rosiana Eoropeana.” Mpandrindra taloha tao amin'ny hetsika nasionalista “Firaisankina mahaolombelona Rosiana” i Khramov ary nanavaka ny tantara ara-politikan'i Navalny ho ambaratonga roa: “i Navalny lehilahy salama” sy “i Navalny ilay mpifoka sigara.”
Nolazain'i Khramov, milaza tena ho Rosiana nasionalista fa naharitra mandra-pahatonga ny volana marsa 2014 ny andro mahafinaritra an'i Alexey Navalny. Nandray anjara tamin'ny ‘Diabe Rosiana’, izay hanaovan'ny tanora skinheads [manasola tanteraka ny lohany] hiaka toy ny hoe “Rosia ho an'ny Rosiana!” “Ampy izay ny famahanana an'i Kaokazia [avaratra]!” ary “Rosia tsy mila Potinina!” i Navalny.
Navalny niteny tao amin'ny “Diabe Rosiana” tamin'ny taona 2011/YouTube
Tamin'ny taona 2007, nanampy tamin'ny famoahana ny hetsika nasionalista “NAROD” izy, izay nivoahan'ny politika liberaly manana tanjona nasionalista, ka tafiditra amin'izany ny fifidianana malalaka, famaranana ny ampihimamban'ny fanjakana amin'ny fampahalalam-baovao, ary ny fankatoavan'i Rosia ny fiandrianam-pirenen'i Transnistria, Abkhazia ary Ossetia Atsimo. Herintaona taty aoriana, rehefa vaky ny ady nifanaovana tamin'i Zeorzia, mbola nilaza indray ny fankatoavan'i Rosia amin'ny fahaleovantena Ossetiana Atsimo sy Abkhaziana indray i Navalny, tamin'ny fananihaniana fa mampiseho faniriana mitovy amin'i Hitler amin'ny fanitarana ny sisintaniny any amin'ny tanin'ny vahiny ny Filoha Saakashvili.
Kintan'i Navalny tamin'ny Septambra 2007 lahatsary “NAROD” manandra-teny amin'ny ananana basy iadiana amin'ireo miloko matroka (mivalomainty) “homosapiens bezpredelius.” / YouTube
Tolagaga tamin'ny tsy fivadihan'i Navalny tamin'ireo nasionalista mpiara-dia taminy i Khramov tamin'ny fotoana niandohan'ny “Hetsika Bolotnaya” tamin'ny Desambra 2011, raha nikiry tamin'ny fanomezana mikrô azy ireo nandritra ny fihetsiketsehana lehibe i Navalny.
Araka an'i Khramov, rehefa tsy nitranga indroa misesy tamin'ny Diabe Rosiana i Navalny, “Navalny mpifoka” indray no nibahana tamin'ny Marsa 2014, rehefa niezaka ny hamaritra tamin'ny fanambarana momba an'i Krimea izy. Tamin'ny 12 marsa 2014, Namoaka lahatsoratra blaogy izay noheverina hanazava ny fijeriny momba ny fanjanahana i Navalny. Tao amin'io lahatsoratra i Navalny no nandresy lahatra fa ny fankatoavan'i Moskoa ny fitsapa-kevi-bahoaka Krimeana handao an'i Okraina ary hiaraka amin'i Rosia dia mety hiteraka latsabato fisintahan'i Tsetsenia amin'i Rosia — fanahiana hafahafa noho ny fahafantarana ny fanohanan'i Navalny taloha ny fanesorana an'i Tsetsenia ihany koa.
“Te-hisambotra an'i Navalny tamin'ny sandriny aho ary hanontany, ‘Fa inona izany resahinao izany ry Alexey?’ Fa inona no idiran'i Tsetsenia amin'ny zava-drehetra? Misy Rosiana 1,2 tapitrisa ao Krimea (63 isanjaton'ny mponina), ary [Rosiana] 24.000 any Tsetsenia (2 isanjaton'ny mponina),” hoy ny nosoratan'i Khramov.
Lalambe tsy misy dikany
Tsy mitombina amin'ny Rosiana toa an'i Khramov ny hevitr'i Navalny momba an'i Krimea, izay mahita izany ho fitaka politika moravidy hitsipahana ny “zavatra iray mba nahamarina” an'i Potinina.
“Niteraka fikorontanana lalina tamin'i Navalny ny tantaran'i Krimea, izay sambany nanaovan'i Potinina fihetsika tahaka ny nasionalista rosiana indray mandeha tsy niverina nandritra ny 15 taona nitondrany. Tsy hitany izay ho ataony. Hanohana ny fitelemana an'i Krimea? Saingy hoheverin-dry zareo ho mpanohana an'i Potinina ianao. Hanohitra? dia veloma hatreo ny endrika fitiavan-tanindrazana ao anatinao,” hoy i Khramov nanoratra, nitaraina fa namarana hatreo ny fototra nasionalista mpandrendrim-bahoaka tao aminy izy mba hahazoana sitraka amin'ny liberaly sy ny vahiny.
Ny ezak'i Navalny hampitony, hoy ny filazan'i Khramov, dia midika fa miteny “zavatra tsy misy dikany,” “resaka imolotra” nampiroboroboin'ny “Biraokratin'i Potinina” izy.
Tamin'ny antsafa iray natao vao haingana, niteny aza i Navalny hoe, “Tsy misy mahasamihafa ny resaka rosiana ny resaka kaokaziana amiko — ratsy kokoa aza ny zava-drehetra any. Ambany kokoa ny karama ary ary betsaka kokoa ny kolikoly.”
Fahadalàna tanteraka izany fanehoan-kevitra izany ho an'ny Rosiana Nasionalista. “Misy karama ambany ihany koa any Rosia ambanivohitra, fa efa naheno tambanivohitra rosiana mpitondra tiraktera na mpaka ronono nametraka vanja milevina na nihazakazaka nankany Afovoany Atsinanana hanao fizahan-tany jihad ve ianao?” hoy ny fanontanian'i Khramov.
Folo taona taty aoriana
Folo taona lasa izay volana Desambra, nanao kabary tao amin'ny antoko politika liberaly Yabloko, izay nilazany ny loza mety ateraky ny “DPNI,” hetsika nasionalista iray voarara noho ny izy mpitrifana, i Navalny ary nandreseny lahatra fa ny teny ierana ao amin'ny hetsika NAROD misy azy dia mifanaraka tsara amin'ny sehatry ny antoko Yabloko. Rehefa fantany fa ho voadaka any ivelany izy, dia namarana ny fanamarihana nataony tamin'ny fikiahana ny “Voninahitra ho an'i Rosia”, hiakam-pitolomana tamin'izany fotoana izany i Navalny.
Nanakiana ny fandroahana nataon'ny politisiana zokiny tao amin'ny antoko, izay tsy nankasitraka ny fitsikerana nataony nandritra ny fifidianana parlemantera taona 2007, i Navalny fony very daholo ny toeran'ny Yabloko tao amin'ny “Duma”m-panjakana.
Folo taona taty aoriana, tsy mbola manana solontena na dia iray akory ao amin'ny parlemanta hatrany ny liberaly mpanohitra ao Rosia ary tsy afa-manoka-baravarana na dia ho azy ireo akory aza ireo mpiandry vavahady — ireo olona nandroaka an'i Navalny —.
Ny fanehoan-kery nataony tamin'ny volana lasa izay saika nahafahan'izy irery nanetsika mpanao fihetsiketsehana an'arivony nanerana ny firenena no ahitana fa lehibe noho ireo mpiara-dia taminy tao amin'i Yabloko i Alexey Navalny. Lehibe mihoatra noho ireo mpifanandrina aminy rehetra taloha izy.
Saingy ao Rosia taorian'ny nahazoana an'i Krimea, mety ho efa nandao ny morona fandrendreham-bahoaka anoherana an'i Potinina i Navalny, ary an-dalan'ny ho olon-tian'ny Rosiana mpanohitra.